Isitudiyo seFama yaseDuck'n Hill kwiNtlambo yaseYarra
Isitudiyo esinomtsalane esikwindawo efanelekileyo yokufumana iindawo zothando, iimpelaveki, iinkukhu / iirandi zokuhlala okanye indawo yokubuyela usapho. Nokuba yeyiphi na i-ajenda awuyi kufuna ukuyishiya le ndawo ibukekayo, iyindawo eyodwa.
Isidlo sakusasa samaqanda amatsha asefama, ibhekoni, intlama emuncu yasekhaya kunye neejam zibandakanyiwe kubusuku ngabunye obubhukisiweyo.
Indawo entle ngaphakathi kwemizuzu yokuqhuba ukuya kwindawo efanelekileyo yaseYarra Valley efana nePanton Hill Hotel, Yarra Valley Chocolaterie, Alowyn Gardens, Rochford kunye neFour Pillars Gin Distillery.
Uyakonwabela iimbono zesixeko ukusuka kwigumbi ngalinye kunye neveranda yakho, egcwele i-rustic chiminea.
Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enomtsalane kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwiveranda. Igumbi lokulala lesibini elinomgangatho ophezulu libandakanya iibhedi ezimbini ezitofotofo kwaye omabini amagumbi okulala anenkqubo yokufudumeza / ukupholisa kunye nefenisha yesilingi.
Ikhitshi elikhulu linendawo yokupheka ehlaziyiweyo, indawo yokuhlamba izitya, ifriji egcweleyo kunye nezixhobo zeti kunye nekofu.
Indawo enkulu yokuhamba kwishawari yahlukile kwindlu yangasese ukuze ube nemfihlo epheleleyo.